warkii.com » Maxkamadda CAS Oo Saacado Kaddib Ku Dhawaaqaysa Go&rsquo;aanka Xukunkii Man City & Sababta UEFA Iyo Sky Blues U Rumaysan Yihiin Inay Guuleysteen
Maxkamadda CAS Oo Saacado Kaddib Ku Dhawaaqaysa Go&rsquo;aanka Xukunkii Man City & Sababta UEFA Iyo Sky Blues U Rumaysan Yihiin Inay Guuleysteen
Maxkamadda CAS ayaa saacado kooban kaddib ku dhawaaqi doonta go’aanka rafcaankii ay Manchester City ka qaadatay ganaaxii ay UEFA ka saartay tartanka Champions League, kaas oo lagaga mamnuucay ka qayb-galka tartankaas.
CAS ayaa bishii hore saddex maalmood dhegaysatay kiiskan, waxaana muddo kaddib ay maanta shaacinayaan go’aanka kama dambaysta ah ee City u go’aamin kara inay tartanka gebi ahaanba ka maqnaato labada sannadood ee soo socda iyo in meesha laga saaro oo lagu waayo dembiga, halka ay arrin saddexaadna suurtogal tahay oo ah in laga yareeyo muddada ganaaxa.
Labada dhinac ee dacwaddu ka dhaxayso ee Manchester City iyo UEFA ayaa la sheegay in mid walba uu dhinaciisa ugu kalsoon yahay inay guuleysan doonaan oo go’aanka maxkamaddu ayidi doono dooddii ay la tageen dhegaysiga dacwadda.
Saddexda maalmood ee dacwadda la dhegaystay ayaa albaabadu u xidhnaayeen oo aanay cid goob joog ah jirin, iyadoo maqal iyo muuqaal lagu xidhiidhayey maadaama Fayraska Korona dartii aanay suurtogal u ahayn inay cidi maxkamadda tagto, waana sababta loo la’yahay cid saadaalisa waxa uu noqon doono go’aanka maanta soo baxaya iyo cidda guushu dhinaceeda raaci doonto.
Maxaa Man City loo ganaaxay?
Xidhiidhka kubadda cagta UEFA ayaa baadhitaan ku bilaabay Manchester City markii uu wargeyska Der Spiegel sannadkii 2018 faafiyey in City ay gashay dembiyo waaweyn oo ay meel kaga dhacday sharciga dhaqaale wanaagga, isla markaana ay ka been sheegtay heshiisyo ay la gashay shirkado, kuwaas oo ay buunbuunisay lacagta ay ka qaadday si ay qaab been abuur ah iskugu dheeli-tirto dakhliga soo galay iyo kharashka ka baxay.
Maxay City ka tidhi?
Manchester City waxay ku dooddayy in aanay jirin wax dembi ah oo ay samaysay, waxaana si cad warbaahinta ula hadlay Ferran Soriano oo ah agaasimaha naadiga.
“Waxa ugu muhiimsan ee aan idiin sheegayaa waa in dhamaan eedaymuhu aanay run ahayn, waana been abuur. Ma jirto lacag uu mulkiiluhu soo geliyo kooxda oo si aan habboonayn loo shaaciyo. Waxaanu nahay koox isku filan, macaash samaysa, ma jirto deyn deyn la nagu leeyahay, xisaabtayadana marar badan ayey hubiyeen hanti-dhawreyaasha iyo sharci-yaqaannada oo baadhitaan ku sameeyey, wayna caddeeyeen.” Ayuu ydihi Soriano oo muujiyey inay ku kalsoon yihiin inay ku guuleysanayaan dacwadda.
Maxay UEFA ka tidhi?
Xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee EUFA oo uu u hadlay madaxweyne Aleksandr Ceferin ayaa sheegay inay horumar ku samayn doonaan sharciga dhaqaale wanaagga, laakiin ay sugayaan waxa ay maxkamadda CAS soo xukunto, waxaanu si kooban u yihdi: “Ilaa inta aan arkayo, Manchester City waxay tagtay maxkamadda CAS, waxaanaynu sugaynaa go’aanka.”
Maxay CAS ka tidhi kiisa
Maxkamadda garsoorka khilaafaadka ciyaaraha ee CAS aytaa bishii February shaacisay inuu soo gaadhay kiiska Manchester City, kaas oo ah rafcaan ay kooxdu ka qaadatay ganaaxa ay UEFA saartay iyadoo lagu eedaynayo inay sharciga dhaqaale wanaagga ku xad-gudubtay, iyagoo lagu riday laba sannadood oo laga joojiyey Champions League iyo ganaax lacageed oo 30 milyan oo Euro ah.
Si kastaba, saacado kaddib ayaa go’aanka maxkamadda CAS uu soo bixi doonaa, waxaana Manchester City ay ogaan doontaa haddii ay xili ciyaareedka dambe ka qayb-geli doonto tartanka Champions League iyo haddii ay mashaqo dhex fadhiisan doonto oo ay labada sannadood ee soo socda ka maqnaan doonto fagaareyaasha Yurub.